Maitiro ekuisa iyo nyowani iPhone 11 muDFU, dzima kana mune yekudzosa maitiro | IPhone nhau
Maitiro ekuisa iyo nyowani iPhone 11 muDFU, dzima kana mune yekudzosa maitiro
Jordi Gimenez | | iPhone 11, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Nhasi tichaenda kunoona iyo matanho atinofanira kutevera kuisa yedu nyowani iPhone 11, 11 Pro kana iPhone 11 Pro Max, muDFU modhi, recovery mode kana kudzima. Uye ndezvekuti kana iwe uri mushandisi anobva ku iPhone pamberi peiyo iPhone X, uchafanirwa kuchinjika kusave neimba bhatani uye izvi zvinokanganisa zvizere pane mamwe emabasa aya ataura.
Izvo zvinoreva zvakapusa zve DFU (Chishandiso Firmware Dzokorora) Kune avo vasingazive, ndiyo sarudzo yatinayo kuitira kuti iPhone yedu kana iPad ibatanidze zvakananga kuTunes uye inotibvumidza kuisa iyo firmware iyo yatinoda kare kudhanilodha pachedu. Iyo yekudzoreredza modhi kune rimwe divi, inotibvumidza kuti titore chishandiso kana paine matambudziko, iyo inobvumidza kudzoreredza kana kugadzirisa chishandiso kubva iTunes. Iyo nzira yekumanikidza kubatanidza kune iTunes kuitira kuti itore hanya iyo yekuvandudza uye kupora iyo iPhone
1 Maitiro ekudzima yedu iPhone 11, iPhone 11 Pro kana Pro Max
2 Maitiro ekuisa DFU modhi pane iPhone 11
3 Iyo yekudzoreredza modhi kana «kupora maitiro». Aya ndiwo mashandisiro ainoita
Maitiro ekudzima yedu iPhone 11, iPhone 11 Pro kana Pro Max
Asi isu tinoenda kune yakanyanya kukosha uye kune izvi isu tinotanga nebasa rekudzima chishandiso. Mune ino kesi, bhatani repanyama kurudyi, rakadzvanywa nguva dzose, rinogonesa Siri, saka isu tinofanirwa kudaro Dhinda uye ubatise bhatani rerudyi panguva imwechete seimwe kuruboshwe kuti uwedzere kana kudzikisa vhoriyamu, kudzamara rugwaro rwekuti "slide kudzima" rwavapo. Zvino isu tichakwanisa kudzima chishandiso zvakananga nekutsvedza pachiridzwa kusvikira chadzima.
Tinogona zvakare kumisikidza iyo SOS emergency call uye tarisa data rekurapa kana iyo iPhone isiri yedu, kana tichifanira kubatsira munhu iyeye. Iyi poindi yakakosha uye munhu wese anofanirwa kuziva nezve iyi sarudzo kubva kuApple zvishandiso. Izvi zvinoratidza zvakananga data remunhu akadai sezita, zera, huremu uye saizi pamwe nenhamba yekufona kana zvikaitika zve emergency
Maitiro ekuisa DFU modhi pane iPhone 11
Chinhu chinotevera chidanho chemberi uye ndiko kuti kuisa iyo iPhone muDFU hakufanirwe kuitwa nemunhu wese. Kana isu tavhura iyi sarudzo pane iyo iPhone tinokwanisa kugadzirisa iyo firmware yechigadzirwa uye izvi mumaoko evasina ruzivo zvinogona kuva dambudziko. Iyo Actualidad iPhone timu haina mhosva yekukanganisa kwaungaite kuchishandiso chako uchishandisa iyi DFU modhi.Kushandisa DFU modhi iri nyore asi inoda nhevedzano yematanho ekudzivirira chero yakakosha kiyi yekubatanidza kubva mukumisikidza iyi modhi. Isu tinongofanirwa kutevera aya matanho atinosiya pazasi uye iyo iPhone 11 uye mamwe ese mamodheru achaita basa iri.
Cable iPhone kune Mac kana PC uye vhura iTunes
Isu tinodzvanya vhoriyamu kumusoro bhatani
Iye zvino isu tinodzvanya vhoriyamu pasi bhatani
Kazhinji isu tinofanirwa kudzvanya uye kubata iyo on / off uye vhoriyamu pasi mabhatani
Iyo skrini ichave nhema. Mushure memasekonzi matatu isu tinosunungura iyo on / off bhatani uye nekuenderera mberi nekubatirira pasi vhoriyamu pasi bhatani
Meseji inoonekwa paMac kana PC uye isu tinogamuchira
Pakupedzisira iyo yekudzoreredza modhi hwindo ichaonekwa uye panguva iyoyo isu tinosunungura vhoriyamu pasi bhatani
Kana isu tisingade kuchengeta iyo DFU modhi inoshanda tinogona kubuda pasina matambudziko. Kubuda muDFU modhi izvo zvatinofanirwa kuita chimwe chinhu chakareruka:
Dhinda bhodhi yepamusoro kamwe chete
Dhinda bhatani rezasi pasi kamwe chete
Batisisa pasi bhatani kurudyi uye Apple logo ichaonekwa
Iyo yekudzoreredza modhi kana «kupora maitiro». Aya ndiwo mashandisiro ainoita
Kuti tiite yekudzoreredza modhi isu tinofanirwa kutevedzera mamwe matanho ari nyore. Kunge DFU modhi, izvi zvakachengeterwa vashandisi vane ruzivo, saka kana paine matambudziko ne iPhone yako tinokurudzira kuti ushandise Apple SAC kana kuenda kune yakagamuchirwa technical service. Kune rimwe divi, harisi dambudziko kuyedza nzira iyi uye uine ruzivo rwako, asi iwe unofanirwa kuziva zvauri kutamba. Kugonesa iyi modhi isu tinotevera aya matanho:
Isu tinovhura iTunes uye tinobatanidza chishandiso
Isu tinodzvanya uye tinosunungura bhatani kuti riwedzere vhoriyamu
Tinodzvanya uye tinosunungura bhatani kudzikisa vhoriyamu
Isu tinochengeta bhatani repamusoro rakadzvanywa kudzamara mudziyo watanga kutangazve otomatiki
Chinhu choga chakasara kushinya nekubata bhatani repamusoro kudzamara mudziyo wapinda muoti yekudzosa.
Tsvaga chako chishandiso pakombuta uye kana iwe ukaona iyo Dzosera kana Gadziridza sarudzo, isu tinosarudza iyo inokodzera isu zvakanyanya. iTunes ichaedza kudzoreredza iOS isina kubvisa iyo data yatinayo pane yedu iPhone. Mirira iTunes kurodha pasi software yeako kifaa. Kana kurodha pasi kwacho kuchitora anopfuura maminetsi gumi neshanu uye chishandiso chobuda musystem mode, mirira kurodha pasi kuti upedze uye dzokorora maitiro zvakare nekuti zvaigona kunge zvakakundikana pane imwe nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa iyo nyowani iPhone 11 muDFU, dzima kana mune yekudzosa maitiro
99% yemapeji anoita chikanganiso chimwe chete., .. unofanirwa kuve ne iPhone kana kudzima kana uchiita izvi ... hapana anoti
Bots uye matchmaking vari kupedzisira vauya kuFortnite neazvino gadziriso
Series 5 "inogara ichiratidzwa" ficha inoshandisa yakawandisa bhatiri